मन्त्रीहरुको काममा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट, मन्त्रालयहरुको कामको समीक्षा ३ दिनसम्म » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मन्त्रीहरुको काममा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट, मन्त्रालयहरुको कामको समीक्षा ३ दिनसम्म
बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०४ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति समीक्षा सुरु गरेका छन् ।
आज (बुधबार) दिउँसो विभिन्न मन्त्रालयहरुको मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले कार्य प्रगति समीक्षा शुरु गरेका हुन् ।
मंगलबार एक कार्यक्रममा नयाँ सरकार बनेपछिको विकास निर्माण कार्यको प्रगतिमा आफु सन्तुष्ट हुन नसकेको भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षा बैठक राखेका हुन् ।
नयाँ बजेटसँगै असार अन्त्यमा मन्त्रालयले पेस गरेका कार्ययोजनाका आधारमा उनले मन्त्री र सचिवहरुसंग छलफल गरिरहेका छन् ।
सबै मन्त्रालयले आफूले प्रत्येक महिना गर्ने कामको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेस गरेका थिए । त्यो कार्य योजनाअनुसार के–के काम कसरी भयो भन्ने बारेमा समीक्षा हुने बताइएको छ ।
समीक्षापछि मन्त्रालयका कामलाई ‘रेटिङ’ गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले विगतका प्रतिबद्धता र चार महिने अवधिको प्रगति विवरण भरेपछि कामको तथ्यांक निस्कने सफ्टवेयर व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैका आधारमा मन्त्रालयको कार्यप्रगति मूल्यांकन हुने छ । साउनदेखि नै महिनैपिच्छे समीक्षा गर्ने भनिए पनि सफ्टवेयरमा असोजदेखि मात्र विवरण भर्न थालिएको थियो । मन्त्रालयहरूले चार महिनाको विवरण एकै पटक भरेका छन् ।
समीक्षा ३ दिनसम्म चल्ने छ । सरकारका काम प्रभावकारी नरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला समीक्षा हुन लागेको हो । बजेटको पहिलो २ महिनाको समीक्षामा करिब ७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको मूल्यांकन गरिएको थियो ।
जेठ १५ मा बजेट आए पनि अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । बजेट खर्चको अनुपातको पनि समीक्षा हुनेछ । सरकार बनेपछि पहिलो पटक मिहिन समीक्षा हुन लागेकाले यसबाट मन्त्री र कर्मचारीहरूको क्षमताको मूल्यांकन पनि हुने छ ।
धेरै मन्त्रीका काममा प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने वा नयाँ विकल्पमा जाने भन्ने निर्णय गर्न पनि समीक्षाले सघाउने प्रधानमन्त्री श्रोतको भनाई छ ।
PREVIOUS POST Previous post: ८० हजार घुससहित जिल्ला न्याधीवक्ता निरौला पक्राउ
NEXT POST Next post: मंसिर ८ गतेको जनसभा प्रवक्ता प्रकाण्डले सम्बोधन गर्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०४